Dib u eeg Nolosha gaarka ah Amina Muse Weheliye, Daawo Barnamijka Soo dhaweynta aamina – The official Somali Historical
Waxay ahaan jirtay mid ka mid ah Dumarka qoob ka cayaarka ugu wanaagsan Golihii murtida iyo madadaalada ee Tiyaartii umadda Soomaaliyed ee Magaalada Muqdisho waqtigii Dowladdii hore waxayna inta badan ka qeyb qaadan jirtay inay Maslaxa dushiisa ku metesho Cayaarta heesta laakiin waxay kaloo ka soo jeeda qoys magaca ku leh Sportiga Soomaaliyed.
Adeerkeeda waxaa uu ahaa Faarax Weheliye Caddow Sindiko, waxaa uu darajada Maamul Sports ka gaaray meesha ugu sareysa oo qof Soomaaliyed ama afrikan ah ka gaaro, Aabaheeda Muuse Weheliye isna waxaa uu ahaa nin kubadda cagta lagu xishmeeyo waxaa uu Guddoomiye ka soo noqday Naadiga kubadda cagta Feynuus.
Amina Muse waxay ka mid ahayd wariyaashii ka hadli jiray Idaacaddii UNISOM maamuli jirtay ee codkii Nabada waxay kaloo ka mid ahayd wariyaasha Wargesyada Magaalada muqdisho.
Markii dambe waxay is guursadeen Cumar Diini Geeddi oo ahaa Saxafi isla markaana madax ka ahaa Wargesyka Maalinlaha ahaa ee Qaranpress oo ka soo bixi jiray Magaalada muqdisho waxayna u dhashay caruur in kastoo markii dambe kala tageen.
Amina waxay kaloo ka soo shaqeysay Hay’adda UNESCO laakiin markii dambe waxay ka mid ahayd wariyaal soomaaliyed oo tartan ama imtixaan u galay laanta af soomaaliga ee bbcda.
degdeg ayay u qabsatay dhegaha dhegaystayaasha ku dhawaad 10 sano ayay bbcda waxay ka ahayd wariye xad iyo jeer ka mid ah kuwa ugu caasan laakiin markii dambe waxay is qabteen Tafatirihii bbcda laanta soomaalida Yuusuf garaad Cumar taasi ayaa sabab u ahayd inay ka tagto bbcda kuna biirto telefeshinka ugu caansan soomaalida ee Universal.
Muddo ku dhaw sanad iyo bar ayay halkaas joogtay waxayna soo saari jirtay barnaamijka Nala fiidso mararka qaarna waxay aqrin jirtay wararka si la mid ah sidii bbc da waxay heshay taageerayaal fara badan.
Waa wariye mararka qaar muujiya lexjada af soomaaliga ay ka soo jeedo laakiin taasi dambe ma aha ee waa awoodeeda shaqada mana lagu dhaleecan karo.
Hadda waxay u wareegtay Amina Muse tvga kale ee Soomaaliyed HCTVLONDON waxayna halkaas kala kulantay soo dhaweyn aad u ballaaran sabab kasto oo jirta marna laguma eedeyn karo inay ka tagto TVga Universal isla markaana ay tagto TVga kale ee HCTVLONDON· balse dad badan waxay dhaliili doonaan barnaamijada ay la imaan doonto.
Durba waxaa soo baxaya in Amina Muuse Weheliye ka sii deyn doonto TVga HCTVLONDON Barnaamijadii ku caan baxday ee ka bixi jiray UNIVERSAL TV haddii ay taasi dhacdo waxaa hubaal ah in sumacadeeda ku weyn doonto.
Wariyuhu waa uu ka tagi karaa hay’ad waana uu tagi karaa meel kale laakiin barnaamijada ayaa ah kuwa xad iyo jeer xuquuqdooda ay leeyihiin Laamaha Warbaahineed.
In kastoo Idaacadaha iyo telefeshinada soomaalida anay lahayn xeerar ama sharci ilaalinaya Barnaamijada haddana waxaa haboon in TVyada ay is tixgeliyaan oo ay is xaq dhawraan.
Previous: Taariikhda Soomaaliya
Next: Taariikh nololeedkii abwaan mohamed xaashi dhamac gaariye oo kooban